မြန်မာပြည် အရင်အတိုင်း မဟုတ်တော့ | ဧရာဝတီ
မြန်မာပြည် အရင်အတိုင်း မဟုတ်တော့
ဧရာဝတီ| September 28, 2012 | Hits:5,984
11 | | မြန်မာပြည်တွင် ကျက်သရေဂုဏ်ရောင် မှေးမှိန် ပျောက်ကွယ်ခဲ့သည်မှာ ကြာခဲ့ပြီ။ စစ်အာဏာရှင် စနစ်အောက်တွင် မြန်မာပြည် အကြောင်း ပြောမည်ဆိုလျှင် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အကြောင်းမှလွဲ၍ ဂုဏ်ယူချင်စရာ အကြောင်း ရှားပါးလွန်းခဲ့သည်။ မတရားမှု၊ မညီမျှမှု၊ ကြမ်းကြုတ်ရက်စက်မှု၊ ဖိနှိပ်ညှဉ်းပမ်းမှု၊ ဆင်းရဲမွဲတေမှု၊ အထီးကျန်မှု၊ ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ ခံရမှုများအကြောင်းများဖြင့်သာ စိတ်မချမ်းမြေ့စရာများနှင့် ပြည့်နေခဲ့ရသည်။
သို့သော် စက်တင်ဘာ ၂၇ ရက်နေ့က အမေရိကန်နိုင်ငံ နယူးယောက်မြို့၌ ကျင်းပသော ၆၇ ကြိမ်မြောက် ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေ ညီလာခံတွင် မြန်မာသမ္မတ ဦးသိန်းစိန် မိန့်ခွန်း ပြောကြား ချိန်တွင်မူ မြန်မာ အစိုးရနှင့် ပြည်သူများ အတွက် ပျောက်ဆုံး နေခဲ့သော ကျက်သရေ ဂုဏ်ရောင် ပြန်လည် ထွန်းပြောင် နိုင်ခဲ့သည်ဟု ဆိုချင်သည်။
ဦးသိန်းစိန်က နိုင်ငံရေး အရ တိုးတက် ဖြစ်ထွန်းမှုများ၊ စီးပွားရေးနှင့် လူမှုရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲ မှုများ၊ သယံဇာတ သုံးစွဲမှု ပွင့်လင်း မြင်သာရှိရေးနှင့် ဘက်လိုက်မှု ကင်းရေး ဆောင်ရွက် ချက်များ၊ သတင်း မီဒီယာ လွတ်လပ်ခွင့်၊ အကျဉ်းသား လွတ်ငြိမ်း ချမ်းသာခွင့်၊ ရခိုင်ပြည်နယ် ပဋိပက္ခ၊ ကချင် အပါအ၀င် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်များနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး တည်ဆောက်မှု၊ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာကိစ္စ စသည့် ကဏ္ဍပေါင်း များစွာကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲ ယူရသည့် တာဝန်ထမ်းရသည်မှာ ၁၈ လ သာရှိသေးပြီး ထိုတာဝန်ကို ဆက်လက် ထမ်းဆောင်သွားနိုင်ရေးအတွက် ကုလသမဂ္ဂနှင့် အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ၊ နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအ၀န်းက မြန်မာနိုင်ငံကို နားလည် ထောက်ခံမှုနှင့် အကူအညီများ ပေးရန် ပြောဆိုသွားခဲ့သည်မှာ သမိုင်း မော်ကွန်းတင်နိုင်ခဲ့၍ ဖြစ်သည်။
ကုလသမဂ္ဂတွင် ပထမဆုံး နိုင်ငံ့အကြီးအကဲအဖြစ် မိန့်ခွန်းမပြောမီ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ကို အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဟီလာရီကလင်တန်က လက်ခံတွေ့ဆုံပြီး မြန်မာ့ပို့ကုန် ပိတ်ပင်ထားမှု ပြန်ဖွင့်ပေးမည်ဟု ပြောကာ မြန်မာအစိုးရ၏ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်ငန်းများကို အသိအမှတ်ပြု ချီးကျူးလိုက်ခြင်းက ဦးသိန်းစိန်အတွက် တွန်းအားဖြစ်စေခဲ့သောကြောင့် ယင်းအခင်းအကျင်း အတွက် လမ်းဖွင့်ပေးသွားသော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို နာမည်ဖော်ထုတ်ပြီး ဦးသိန်းစိန်က ပထမဆုံးအကြိမ် ချီးကျူးဂုဏ်ပြုခဲ့သည်။
ထို့အပြင် ပထမဆုံးအကြိမ် အဖြစ် နိုင်ငံတော်သမ္မတက ယခင် စစ်အစိုးရများ လက်ထက်က အရေးတယူ မလုပ်ခဲ့သော မြန်မာ့ဂုဏ်ဆောင် ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ်ဟောင်း ဦးသန့်၏ အမည်ကို ထုတ်ဖော် ပြောဆိုပြီး ဦးသန့်၏ “တခုတည်းသော ကမ္ဘာ” အမြင်ကို ယုံကြည်ကြောင်း၊ ငြိမ်းချမ်းစွာ အတူယှဉ်တွဲ နေထိုင်နိုင်ပြီး မတူကွဲပြား ခြားနားမှုများ ရှိနေသော်လည်း လုံခြုံ ဘေးကင်းသော ကမ္ဘာကြီးအဖြစ် မျှော်မှန်းထားကြောင်း၊ ကိုယ်ချင်းစာတရား၊ နားလည်မှု၊ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှု၊ သည်းခံခွင့်လွှတ်မှုများကို လိုက်နာ ကျင့်သုံးနိုင်မည်ဆိုပါက ပိုမို ငြိမ်းချမ်းပြီး သာယာဝပြောသည့် ကမ္ဘာကြီး အဖြစ်သို့ ပိုမိုလျှင်စွာ ရောက်ရှိနိုင်မည်ဟု ယုံကြည်မိကြောင်း ပြောဆိုသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဆိုးမွေ တရပ်ဖြစ်သည့် တိုင်းရင်းသားဒေသ ပဋိပက္ခများနှင့်ပတ်သက်ပြီး ပြောကြားရာ၌လည်း လတ်တလော ရင်ဆိုင် ဖြေရှင်းနေရသော ကချင်ပြည်နယ် စစ်ပွဲများ ရပ်ဆိုင်းသွားရေး ဆက်လက် အကောင်အထည် ဖော်သွားမည်ဟု ပြောဆိုသည့်အပြင် “အမျိုးသားအဆင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲတွေ ဆက်လက် ပြုလုပ်သွားပြီး တိုက်ခိုက်မှုတွေ လုံးဝ အဆုံးသတ်စေမည့် အပြီးသတ် သဘောတူညီမှုရအောင် ဆောင်ရွက်သွားမည်” ဟု ကတိကဝတ်ပြု ပြောကြားသည်။ သမ္မတကို ဆန္ဒပြနေခဲ့သော အမေရိကန်နိုင်ငံရောက် ကချင် အမျိုးသားများကို မြန်မာအစိုးရ ကိုယ်စားလှယ်များ ခေါ်ယူ တွေ့ဆုံခဲ့မှုကလည်း အပြုသဘော ဆောင်ခဲ့သည်။
ရခိုင်အရေးနှင့် ပတ်သက်၍လည်း မြန်မာနိုင်ငံတွင်း နေထိုင်သူ ပြည်သူအားလုံး လူမျိုးမရွေး၊ ဘာသာမရွေး၊ ကျား/မ မခွဲဘဲ ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်း၊ လုံလုံခြုံခြုံ နေထိုင်နိုင်သည့် အခွင့်အရေးရှိကြောင်း၊ လွတ်လပ်ပြီး အချုပ်အခြာ အာဏာပိုင် နိုင်ငံတနိုင်ငံ အနေနှင့် မိမိနယ်စပ်မျဉ်းများ လုံခြုံရန် ဆောင်ရွက်ခွင့်၊ နိုင်ငံ အချုပ်အခြာ အာဏာကို ကာကွယ်ပိုင်ခွင့်နှင့် ကာကွယ်နိုင်ခွင့် ရှိသည်နှင့်တပြိုင်နက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ စံနှုန်းကျင့်ထုံးများနှင့် ကိုက်ညီစေရန် အတတ်နိုင်ဆုံး ကြိုးစား ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုသည့်အပြင် “ဒီမိုကရေစီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်ငန်းစဉ်ဟာ အလွန် နက်နဲခက်ခဲပြီး စိတ်ရှည်ဖို့ လိုအပ်တယ်ဆိုတာ ကျနော် ကောင်းစွာ သတိပြုမိပါတယ်” ဟု ဝန်ခံခဲ့သည်။
ခြုံ၍ကောက်ချက်ချရလျှင် ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေညီလာခံမှာသာမက အာရှလူ့အဖွဲ့အစည်း Asia Society ၌ပါ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် အထူးဂရုပြု ပြောကြားသည်မှာ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဒီမိုကရေစီစနစ် ထွန်းကားလာစေရန် ဒီမိုကရေစီဆန်သော နိုင်ငံရေး ယဉ်ကျေးမှု ပြန်ရှင်သန်လာစေရေး ဖြစ်သည်။ “အစိုးရနဲ့ သက်ဆိုင်သူ အားလုံးအကြား နိုင်ငံရေး သည်းခံမှု ရှိရှိဖြင့် မျက်နှာစုံညီ ဆွေးနွေး အဖြေရှာခြင်းဆိုတဲ့ နိုင်ငံရေး ယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့သစ်ကို စတင် ပုံဖော်နိုင်ခဲ့ပြီ” ဟု ကြွေးကြော်ခဲ့ပြီး မတူကွဲပြားမှု များအား လက်ခံနားလည်ပြီး ညှိနှိုင်းပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်နိုင်သော လူ့အဖွဲ့အစည်းတရပ် ပေါ်ပေါက်လာရန် ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်နေသည့်အချိန်ဟု ပြောကြားခဲ့ခြင်းသည် ယခင် စစ်အစိုးရများနှင့်မတူ လမ်းသစ်ကို ဦးသိန်းစိန် ဖောက်နေပြီဖြစ်ကြောင်း ခိုင်မာစေခဲ့သည်။
အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး၏ သဝဏ်လွှာကို သမ္မတဦးသိန်းစိန်က ရိုကျိုးစွာ လက်ခံနေသော ဓာတ်ပုံမှာ ၁၉၉၈ ခုနှစ်တွင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ငွေကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌရှေ့၌ ကွယ်လွန်လေပြီးသော အင်ဒိုနီးရှား အာဏာရှင် ဆူဟာတို လက်မှတ်ရေးထိုးနေသော ဓာတ်ပုံကို မြန်မာတို့ သတိရမိစရာဖြစ်သော်လည်း အင်ဒိုနီးရှားများကဲ့သို့ ဒေါသူပုန်ထ အုံကြွစရာ မရှိရုံမက ဦးသိန်းစိန်ကို ကရုဏာပင် သက်ကြရသည်။ အကြောင်းမှာ မိမိတို့ နောက်ကျခဲ့သော်လည်း လာခြင်းကောင်းခဲ့ပြီဟု တွေးဖြေ နိုင်သောကြောင့်ပင်။
Your email address will not be published. Required fields are marked *	Name * Email * Website Comment Aung khin October 4, 2012 - 11:04 am	The editor failed to mention Thein Sein told the half truth during the interview with Asia Society in USA recently. The editor needs to listen to this interview again. Thein Sein said the economy of Burma was affected by sanctions whereas Aung Sann Suu Kyi said sanctions only affected Burma politically. Quoting IMF, Suu Kyi said the economy was bad due to mismanagement.
But the editor is trying to carry favour Thein Sein in hope of gettingavisa easily oraposition in the government in future.